Kiisaska ugu fiican dhammaan noocyada iPhone 11 | Wararka IPhone
Luis Padilla | | Qalabka IPhone, iPhone 11
Soosaarayaasha kiisaska iPhone-ku waxay ku degdegayaan inay helaan moodooyinkooda cusub oo mararka qaarkood ay yimaadaan xitaa kahor iPhone-yada cusub. Soo bandhigida iPhone cusub macnaheedu waa raadinta kiisaska cusub si loo ilaaliyo, laakiin sidoo kale in la siiyo taabashadaas shakhsi ahaaneed ee noo oggolaaneysa inaan ku kala saarno iPhone-gaaga jaleec ahaan.
Maaddaama raadinta daboolka ugu habboon mararka qaarkood ay tahay hawl aad u adag, waxaan ku sameynay xulasho kiisaska ugu fiican ee aad ka heli karto mid ka mid ah saddexda nooc ee iPhone-ka cusub: iPhone 11, iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max. Casri ah, gardarro ah, mid caadi ah, maqaar, ilaalinta ugu badan ... hubaal waxaad heli doontaa kii aad raadineysay.
JETech Silicone Case ...
CANSHN Dacwada iPhone ...
Kiiska JETech la jaan qaadi kara ...
1 Qalabka Hubka Magaalada
7 Laba iyo toban Buug Buug
Qalabka Hubka Magaalada
UAG waxay na siisaa daboollo leh qaab aad u kala duwan. Iyadoo naqshad warshadeed aad u casri ah oo leh heerar ilaalin aad u sarreeya. Astaantu waxay dib u cusbooneysiisay moodooyinka ugu guulaha badan:
Hubka Casriga ah ee Magaalada ...
Balaastikada hubka ee magaalada ...
Urban Armor Gear Stealth...
plasma- Iyada oo leh qolof adag iyo jilicsanaan jilicsan, geesaha kiiskan waxaa lagu xoojiyay ilaalinta saameynta dheeriga ah, la kulanka heerarka Ciidanka.
Boqortooyada: Shan lakab oo ilaalin ah, oo ka sameysan maqaar qaali ah iyo walxo macdan ah, waxay leedahay qabasho aan caadi ahayn, badhano waawayn waxayna labalaabaysaa shuruudaha heerarka ciidanka Mareykanka. Kalsoonidaadu waa tan oo kale markay ku siiyaan dammaanad 10 sano ah.
Plyo: Aad ayey ula mid tahay kiiska Plasma laakiin leh naqshad nadiif ah oo kuu oggolaaneysa inaad aragto dhabarka iPhone-kaaga.
Pathfinder: Xaaladdan oo kale waxaan leenahay kiis gebi ahaanba madmadow leh oo lagu heli karo midabbo badan oo kala duwan, ilaalintu sidoo kale waa darajo milatari, nashqadkeedana lama oga.
Waxaad haysaa dhammaan buugga ballaaran ee kiisaska UAG ee loogu talagalay iPhone-ka cusub boggan (isku xirka) iyadoon lacag lagaa qaadin.
Nomad Gawaarida Gawaarida ee ...
Nomad wuxuu na siiyaa aruurinta daboolis kaas oo maqaarku waa halyeeyada, laakiin leh difaac heer sare ah mahadsanid iskudarka darfaha TPU ee barkinta dayrta kasta. Maqaarka ay adeegsadaan waa midka ugu tayada sarreeya, waxayna leeyihiin moodallo midabyo bunni ama madow ah:
Rugged: dhabarka dambe ee caadiga ah oo leh difaac ilaa 183 sentimitir
Folio: Difaac isku mid ah laakiin leh dabool hore oo leh seddex kaar oo kaararka ah iyo mid ka mid ah waraaqaha lacagta.
Tri Folio: oo leh dabool laba jibbaaran oo ku duuban iPhone-kaaga, afar boos oo kaararka ah iyo laba biil, adigoon ilaawin ilaalinta kuwii hore.
Maqaarka Firfircoon: naqshad la mid ah Rugged laakiin isticmaalidda maqaar leh daaweyn gaar ah oo ka dhigaysa mid u adkaysata biyaha (kama dhigayso iPhone-ka mid adkaysi u leh, kaliya kiiska). Ku habboon kuwa kuwa "si xun ula dhaqma" daboolkooda dareerayaal, qoyaan, dhidid, iwm.
Waqtigan xaadirka ah daboolida waxaa laga heli karaa oo keliya websaydhkooda (isku xirka) laakiin si dhakhso leh ayey u gaari doontaa dukaamada jirka iyo internetka sida Amazon.
Mujjo Case ee Apple ...
Mujjo - Nooca Daboolka ...
Nooca Kiiska Hargaha Mujjo ...
Haddii aad jeceshahay kiisaska maqaarka Apple, waa inaad tijaabisaa tan Mujjo. Maqaarkiisu waa midka ugu tayada sareeya, qaabkiisuna aad ayuu ula mid yahay kan Apple, laakiin iska caabintiisu way ka weyntahay oo qiimaheedu wuu ka hooseeyaa.. Waxay sidoo kale fursad u leeyihiin inay ku iibsadaan booska dhabarka kaararka. Waxaa loo heli karaa dhammaan noocyada cusub ee iPhone-ka, waxaad horeyba uga heli kartaa websaydhkooda (isku xirka) iyo ugu dhakhsaha badan dukaamada internetka iyo jirka.
Daboolka Moshi wuxuu leeyahay naqshad aad loo safeeyey oo leh nidaam hal abuur leh oo iyaga ka dhigaya kuwo la jaan qaadi kara "Snap To" dhejiyeyaasha magnetka ah ee kuu oggolaanaya inaad ku dhejiso iPhone-ka jaangooyooyin isku habboon aan lahayn qabsatooyinkooduna noocay doonaan ha ahaadeene, oo keliya xoogga birlabta. Waxay leedahay dhowr moodel oo aad u xiiso badan:
Dibadbaxa: waa labadaba dabool iyo boorso leh laba kaar oo boos iyo qayb loogu talagalay qaabaynta wax ku oolka ah. Waxay ka sameysan tahay maqaar vegan, kiiska waa laga goyn karaa kiiska jeebka markasta oo aad rabto, wuxuuna bixiyaa ilaalin heer milateri ah.
iGlaze: isku dhafka saxda ah ee naqshadeynta iyo ilaalinta, oo leh qaab bir ah iyo muuqaalka "burush" ee dhabarka, madow iyo cadaan labadaba runtii waa cajiib.
Altra: kiis dacwo leh oo leh suunka curcurka, ee loogu talagalay kuwa doonaya inay ku wataan iPhone-kooda gacantooda iyaga oo aan halista u ku dhicin. Waxaa sii dheer waxaa jira xarkaha jirka ee ikhtiyaariga ah si gacmahaaga looga dhigo mid xor ah.
Dhammaan guryahooda waxay leeyihiin damaanad nololeed, oo waxaad ka heli kartaa bogga Moshi (isku xirka)
OtterBox Commuter - Kiis ...
Goorma waxaan ka hadlaynaa ilaalinta, waxaan ka hadleynaa Otterbox shaki la’aan. Buugyaraha ay ka kooban tahay ayaa ka buuxa moodello aan badnayn oo ka ilaaliya "wax badan" illaa "wax walba". Aad ayey u adag tahay in la awoodo in la taxo moodooyinka ay wataan, maxaa yeelay waligeen ma dhameystiri doonno, laakiin waxaan kuu sheegi karaa in kuwa ugu cadcad ay yihiin:
Daafaca: haan run ah oo ka hortageysa nooc kasta oo waxyeelo ah oo soo gaadha taleefankaaga, kana ilaaliya dhibcaha, boodhka iyo wasakhda. Xaaladda ugu fiican ee goorta ay tahay inaadan la socon iPhone-kaaga.
dhabanada: ku habboon maalinba maalinta ka dambeysa, adigoon ka walwalin in kuwa yaryar ay qaateen iPhone-ka. Iftiin, khafiif ah oo raaxo leh in la xidho, waa iibsi ku habboon.
Strada: Haddii aad ka sii jilicsan tahay oo aad jeceshahay maqaar laakiin aadan rabin inaad ka joojiso ilaalinta, kiiska estrada oo leh daboolkiisa hore waa waxa aad raadineyso, oo leh boosaska kaararka caadiga ah.
Waxaad ka arki kartaa kuwan iyo daboollo kale oo badan bogga Otterbox (isku xirka).
Kuwa jecel daboolida daboolka ah, Peel ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican. Waxay yihiin daboollo tayo sare leh, wax muhiim u ah noocan daboolida oo aad u khafiif ah oo jilicsan oo ay jebin karaan iyagoo isku dayaya inay ka saaraan, iyada oo diirka leh dhibkan ma lahaan doontid. Waa run oo iyagu kama difaaci karaan dhicitaannada waaweyn, laakiin way iska ilaaliyaan ka ilaali waxyeelada ka soo gaarta isticmaalka taleefanka caadiga ah, sida xoqitaanka iyo wax lagu xoqo. Waxaa lagu heli karaa buug-gacmeed ballaadhan oo midabbo leh, hufan, tarjumaad, hufnaan ... waxaana hadda laga iibsan karaa websaydhkooda (isku xirka)
Laba iyo toban Buug Buug
Waxaan ku dhameysaneynaa mid caadi ah. Naqshad aan la ogaan doonin, oo aan cidna uga tagaynin, inaad jeceshahay iyo in kale, oo aan lahayn meel dhexe, laakiin taasi Ma baxayo qaabka waxayna sidoo kale bixisaa difaac sare oo aad iPhone ah. Iyada oo boosaska kaararka iyo suurtagalnimada. Ku dhigida iPhone-kaaga qaabka muuqaalka si aad u daawato waxyaabaha ku jira warbaahinta badan waa "waa inuu lahaadaa" xulasho kasta oo kiis ah. Waxaad ka heli kartaa websaydhka laba iyo tobanka Koonfurta (isku xirka).
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Kiisaska ugu fiican dhammaan noocyada iPhone 11
IPhone 11 oo leh 4GB RAM, iPhone 11 Pro iyo Max oo leh 6GB RAM
IPhone 11 Pro wuxuu leeyahay 4G LTE isku xirnaan 13% ka dhakhso badan iPhone XS